OTU ESI EME KA WI-FI DỊ MGBAGWOJU ANYA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ozugbo onye ntanetị Wi-Fi na netwọk ikuku na-apụta n'ụlọ (ma ọ bụ ọrụ), ọtụtụ ndị ọrụ na-ezute nsogbu ndị metụtara nkwupụta mgbagwoju anya na ọsọ Ịntanet site na Wi-Fi. Ma, m chere, ga-amasị ọsọ na mma nke Wi-Fi n'ikuku ka kacha.
N'isiokwu a, m ga-atụle ọtụtụ ụzọ iji bulie mgbaàmà Wi-Fi ma melite ogo nnyefe data na netwọk ikuku. A na-ere ụfọdụ n'ime ha n'enweghị ihe ọ bụla na-adabere na ngwá ọrụ ndị ị nwere, ụfọdụ nwere ike ịchọ ụfọdụ mmefu, mana na oke nha.
Gbanwee ọwa ikuku
Ọ ga-adị ka ihe na-abaghị uru, ma ihe dịka ngbanwe nke ọwa nke Wi-Fi router nwere ike imetụta oke ọsọ na obi ike nke inweta ngwaọrụ site na ngwaọrụ dị iche iche.
Eziokwu bụ na ka onye ọ bụla n'ime ndị agbata obi ya nwere netwọk nke aka ya, ọwa ikuku na-agbanye "Gbanyụọ". Nke a na-emetụta ọsọ nke nnyefe, nwere ike ịbụ ihe kpatara ya, na nbudata ọrụ nke ihe, njikọ ahụ agbajiri na ihe ndị ọzọ.
Ịhọrọ channelụ ikuku free
N'okwu ahụ Ihe mgbaàmà ahụ na-apụ na Wi-Fi dị ala m kọwara n'ụzọ zuru ezu otu esi achọpụta ebe ọwa nwere onwe ma mee mgbanwe kwesịrị ekwesị na ntọala nke router.
Bugharịa router Wi-Fi gaa ebe ọzọ
Hụ onye nkwụnye ọkụ na pantry ma ọ bụ na entresol? Gwa ya na ọnụ ụzọ ụzọ, na-esote ihe nchekwa ígwè ma ọ bụ ọbụna ebe dị na wiwi nke wires n'azụ usoro usoro? Ịgbanwe ọnọdụ ya nwere ike inyere aka melite mgbaàmà Wi-Fi.
Ebe kachasị mma nke onye na-ahụ maka ekwentị ikuku dị n'etiti ebe a ga-enwe ike iji netwọk Wi-Fi. Ihe ndị e ji ígwè na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ igwefọn na ụzọ bụ ihe kachasị akpata nsogbu ikuku.
Melite ngwa ngwa na ọkwọ ụgbọala
Imelite ngwa ngwa nke onye ntanetị, yana ndị ọkwọ ụgbọala Wi-Fi na laptọọpụ (karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji ọkwọ ụgbọala-mkpọ ma ọ bụ Windows arụnyere onwe gị), nwee ike idozi ọtụtụ nsogbu ndị nwere nsogbu na netwọk ikuku.
Ntuziaka maka imelite ngwa ngwa nke router nwere ike ịchọta na ebe nrụọrụ weebụ m na "Configuring the router" section. Ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ maka nkwụnye laptọọpụ Wi-Fi nwere ike ibudata site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ.
Ga-enweta Wi-Fi Antenna
2.4 GHz Wi-Fi D-Link High Get Antenna
Ọ bụrụ na onye rawụta gị bụ otu n'ime ndị na-ekwe ka iji eriri mpụga (ọ dị mwute ikwu na ọtụtụ n'ime ụdị ọnụ ala ndị dị ọnụ ala nwere antenna ha wuru), ị nwere ike ịzụta antenna g 2.4 GHz na uru dị elu: 7, 10 na ọbụna 16 dBi (kama nke ọkọlọtọ 2-3). Ha nọ na ụlọ ahịa na ntanetị, ọnụahịa nke ọtụtụ ụdị bụ 500 - 1500 rubles (nhọrọ dị mma na ụlọ ahịa ndị dị n'ịntanetị), n'ebe ụfọdụ a na-akpọ ha ụda Wi-Fi.
Onye nrụzi nke abụọ na-emegharị ma ọ bụ ebe ịbata
Nhọrọ nke ụdị nke Wi-Fi router Asus (onye ntanetị, nhazi, ebe ntinye)
Na-eburu n'uche na ọnụahịa nke ndị na-ahụ maka wiwa ala dị ala, ma eleghị anya, ị nweta gị n'aka onye na-enye gị, ịnwere ike ịzụta onye ọzọ na-ahụ maka Wi-Fi (ọkacha mma otu ụdị) ma jiri ya na-emegharị ma ọ bụ ebe ịbata. Ọtụtụ ndị na-eme njem n'oge a na-akwado ụdị ọrụ ndị a.
Ịchọpụta onye ntanetị Wi-Fi na nkwado maka ọrụ na ugboro 5Ghz
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ ugbo ikuku nke ndị agbata obi gị na-arụ ọrụ na 2.4 GHz, karịchaa, nhọrọ nke ọwa a na-enye n'efu, dịka e kwuru na paragraf mbụ nke isiokwu a, nwere ike ịbụ nsogbu.
Onye ntanetị TP-Link na nkwado maka 5 GHz na 2.4 GHz frequencies
Ihe ngwọta nwere ike ịbụ ịnweta ihe ntanetị ọhụụ ọhụrụ, nke nwere ike ịrụ ọrụ, gụnyere na 5 GHz (rịba ama na ngwaọrụ ndị ahịa ga-akwado oge a).
Nwere ihe iji gbakwunye na isiokwu nke isiokwu ahụ? Dee ihe a.